ARwa eji achọ igwe Manufacturers na suppliers - China EGBEKWE igwe Machinery
Obere ndi na-egwu ala, nke nwere ike mgbe ụfọdụ mara dị ka ndị na-egwu ala mini nwere ike inye aka mee ka ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke azụmahịa na-adị mfe. Dị ka ọ na-adịkarị site na 1 ton ruo 10 tọn, mini excavator a na-enye gị ikike ịbawanye arụpụtaghị ihe na oge ọrụ n'ime ọnọdụ ọrụ kacha sie ike na nke kachasị egbochi.
A na-akpọkwa ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-ese n'elu mmiri, bụ nke e mere iji rụọ ọrụ nke ọma na osimiri, ọdọ mmiri, ọdọ mmiri na idozi ebe a na-edozi ọdọ mmiri. Anyị nwere ọkachamara otu iji chepụta na omenala mere akwa mma na vasatail ụdị nke amphibious excavators niile isi ụdị nke na-egwupụta sitere na site na 5 ruo 50 tọn. Ndị ọrụ Bonovo nwere ike ịnye ngwọta dị iche iche gụnyere ịgbanye mgbapụta, ịga ije ogologo oge, ikpo okwu na-ebugharị, ngalaba ụgbọ mmiri na ogwe aka dị ogologo.
Bonovo na-enye ọtụtụ ndị na-egwu mmiri crawler na-ajụ ihe sitere na 20 ruo 34 tọn. Nke a 20 tọn crawler excavator si Bonovo bụ nzube e wuru iji gboo mkpa nke ahịa na-achọ oke ọrụ. Nhazi ngwụcha ngwụcha, igwe injin turbocharged nwere igwe na-egosipụta ike dị elu, ịmị mmanụ ọkụ na ike mmegharị dị ike. N'ịbụ nke nwere otu akụkụ kachasị asọmpi nke ahịa excavator, Bonovo's WE220H crawler excavator bụ ezigbo onye ọlụlụ maka ọtụtụ ngwa ọrụ.
Họrọ ezigbo obere ihe eji arụ ọrụ maka ọrụ gị dị ezigbo mkpa ịbawanye arụpụtaghị ihe. Bonovo nwere ike ịnye ọtụtụ ụdị iji kwado ọrụ gị, agbanyeghị na ị na-achọ crawler ma ọ bụ whecaled excavator, Bonovo nwere ike ịnye gị ezigbo ọrụ ọrụ site na 0.7 ruo 8.5 tonnage.
Mini Excavator 2 Tọn - ME20
Ezubere Bonovo mini excavators maka ndị ọrụ iji bulie nkasi obi cab na atụmatụ nchekwa mmanụ na-eweta ọtụtụ ntụgharị, arụmọrụ na nrụpụta ọrụ na saịtị ọrụ gị. You nwere ike ịhọrọ dị iche iche excavator Mgbakwụnye dabara gị kpọmkwem ọrụ, Bonovo otu nwere ike na-enye gị ihe kasị mma akụkụ ahụ mapụtara na mgbe-sales ọrụ.